Amakha amahle kakhulu we-unisex ongabelana ngawo nomlingani wakho | Amadoda aSitayela
Amakha amahle kakhulu we-unisex ongabelana ngawo njengezithandani
Amadoda aSitayela | | amakha
Konke okulandela ukulingana kuya ngokuya kuphumelela ngokwengeziwe. Futhi lokhu kuhunyushwe kahle kakhulu yi umhlaba wemfashini, Eqhubeka nokuhlinzeka ngezingubo ze-unisex ezifanele bonke ubulili. Kepha esikhathini eside ngaphambi kokuba lo mkhiqizo ube yizakhamizi, amanye ama-fashionistas, abebenesibindi sokugqoka izingcezu zohlobo lwabo oluhlukile. Eqinisweni, sikubona kaningi phakathi kwabathonya. Yebo, umhlaba wamakha namakha nawo ubufuna ukuthatha isinyathelo sokulingana. Yize ingekho eminingi imikhiqizo eye yathula okwamanje, eminye iyathanda Calvin Klein Basinikeze izinketho zeminyaka amakha e-unisex.
1 Kungani amakha enobulili?
2 Kungani ugqoka amakha e-unisex
Kungani amakha enobulili?
Ngaphambi kwalokho, imikhiqizo ibizinikele ekwenzeni amakha ahlukaniswe ngokusobala. Eminye ibibhekiswe kwabesilisa kanti abanye ibhekiswe kwabesifazane. Futhi kwenziwa kanjani lokhu? Ngokusetshenziswa kwamakha nephunga. I-rose, i I-jasmine noma i-lavender kwakuyiphunga elihlotshaniswa ngokusobala nabesifazane. Esikhundleni salokho, i-oki noma i-citrus yayihlotshaniswa namakha abesilisa. Kwaba njalo iminyaka eminingi.
Ngaphandle kwalokhu, noma kunjalo, abanye besifazane nabesilisa babe nesibindi sokugqoka amakha obunye ubulili babo. Futhi kulula ukuyiqonda, ngoba sikhuluma ngamakha, nokunambitheka kukodwa. Futhi ukuhlangana kwamakha nohlobo oluthile kuyinto yezenhlalo ngokuphelele. Kungakho imikhiqizo eminingi ibibheja kumakha we-unisex iminyaka. Lokho wukuthi, bavele benze amakha angenalo ilebula, ngephunga elimnene nelimnandi, noma ngubani ozizwa ukuthi elabo angalisebenzisa.
Kungani ugqoka amakha e-unisex
I-CK eyodwa, isibonelo semakha ye-unisex
Uma kukhona uphawu lokuphayona emakethe ye-unisex yamakha, nguCalvin Klein, iziphakamiso zayo ezimbili zakudala: UClavin Klein amakha y CK One kube yisilinganiso semakha we-unisex iminyaka eminingi. Amakha amnandi amasha futhi aphelele nsuku zonke.
Kungani ugqoka amakha e-unisex? Yebo, ngoba akekho umuntu okufanele akutshele ukuthi yiliphi iphunga okufanele ulisebenzise ngezizathu zobulili kuphela. Ngoba okulungile kuzokwazi ukukhetha ngokukhululeka lelo phunga nephunga elisichaza kakhulu, esikuthanda kakhulu nokuthi yini esivumelana nayo kakhulu. Le yinselelo yomkhakha, imikhakha eminingi esevele ibhekene nayo.
Akukho phunga eliyisici sohlobo oluthile, lena yinhlangano yezenhlalo eyenziwe ngumuntu, ikakhulukazi imboni. Ngakho-ke, uma indoda ikhomba ngayo yonke into enezimbali, ingawasebenzisa ngokuphelele amakha eroses. Futhi uma owesifazane ekhomba ubusha bama-citrus, uzozizwa ekhululeke kakhudlwana ngamakha anuka kanjena.
Ngaphezu kwalokho, siya khona imakethe eya ngokuya yehlukahluka, esisinikeza amakha ayinkimbinkimbi ngokwengeziwe, anephunga elihlukile nelithakazelisayo. Kuyindaba yokuthola iphunga elisiveza kakhulu, sishiya eceleni noma ngabe ngabesilisa noma ngabesifazane.
Akumangalisi ukuthi sibona okuningi ngokwengeziwe amakha e-unisex ezitolo uyeke ukubona umehluko ocacile phakathi kwamakha abesilisa namakha abesifazane. Umehluko owaphawulwa ukuqhuma kwemboni, futhi lokho kuphawule umlando walo mkhakha wonke.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » amakha » Amakha amahle kakhulu we-unisex ongabelana ngawo njengezithandani
Inothi elihle kakhulu. I-Perfume ayinalo ucansi
Izinhlelo nezipho zoSuku Lwezithandani
Ungayishayela kanjani i-ABS